Sarontava Folkloric ao Però | Vaovao momba ny dia
Fitsangatsanganana sy mpizahatany | | America, kolontsaina, Toerana fitsangatsanganana
Ny iray amin'ireo sorabaventy amin'ny asa-tanana Peroviana dia ny saron-tava, nampiasaina hatrizay hatrizay mba hampiasaina hifandraisany amin'ny masina ary hifandray amin'ny sehatry ny mistika. Any Peroa, lalina ny fifandraisany amin'ireo dihy nentin-drazana. Maro ny dihy toa ny diablada, ny morenada ary ny tuntada no mampiditra sarontava mba hampiavaka ny toetran'izy ireo.
Avy amin'ny Peru talohan'ny Hispanika, ny sarontava amin'ny kolontsaina Chimú sy Mochica, vita amin'ny volamena, volafotsy ary varahina. Amin'izao fotoana izao dia vita amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny hazo, plastera, hoditr'ondry, vifotsy, harato tariby ary lamba mihantona izy ireo.
En Puno, ny sarontava dia ampahany lehibe amin'ny fetin'ny Virgen de la Candelaria. Anisan'ireo rehetra, ny tena malaza dia ny sarontava an'ny mpanjaka devoly, izay mitafy satro-boninahitra volamena, tsy manana saokany ary manana loha kely 7 misy tandroka sy dragona, izay maneho ny fahotana lehibe. Ny vehivavy ny devoly dia miravaka haingo mandady sy tandroka roa amin'ny volony volamena. Samy vita amin'ny varahina ireo sarontava ireo. Ny endrika malaza iray hafa dia ny mpanjaka mainty, toetra iray avy amin'ny morenada, izay mitondra fantsona eo anelanelan'ny nifiny, manana endrika mainty, molotra ambany sy orona malalaka.
En Cuzco, ny sarontava dia ao amin'ny Fiesta de la Virgen del Carmen, ao Paucartambo. Ny sarontava dia vita amin'ny plaster sy taratasy mando. Ny saron-tava dia manamarika noho ny mampiavaka azy ireo fotsy hoditra manana maso manga, volombava, orona be ary teboka polka. Azonao atao ihany koa ny mahita sarontava tsiky sy lela goavambe ary koa sarontava mainty misy endrika volamena sy tomany manga. Ny sasany amin'ireo dihy izay misy ny fampiasana sarontava dia ny contradanza, caporal ary machu.
En Cajamarca, ny sarontava dia ampahany amin'ny karnavaly. Ny sarontava dia vita amin'ny alàlan'ny tariby ary misy endrika sarontava.
More Information: Catacaos: renivohitry ny asa-tanana sy ny zava-manitra peroviana
Sary: Maso nomerika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Sarontava Folkloric ao Però
Fitsangatsanganana an-tsambo amin'ny lakandranon'i Birmingham